Ukuchasana noBungqina boBukumkani bamaNgqina kaYehova
Ukuxhatshazwa kweziganeko ezi-6 zeBhayibhile zeWatchtower Society kunye namaNgqina kaYehova
by UIsake J. Harris
Ngaba Iimpawu Ezi-6 ZeBhayibhile Zichaza Ngaba AmaNgqina KaYehova NjengoNqulo Lokwenyaniso?
IBhayibhile yeMboniselo kunye neTract Society ibonisa ukuba yiyodwa inkolo yeQiniseko ngokubhekiselele kwimfuno ezintandathu zeBhayibhile kuphela ezidibana nazo. Ukuze le nto ibe yinyani ngokuqinisekileyo, kwaye ingengomcimbi wokholo, ubungqina bobuNko boBukumkani kufuneka bube buchanekileyo kwaye bangashiyi indawo yokungathandabuzeki. Bamele baxhomekeke kwiMboniselo yoMbutho kunye noMboniselo weMboniselo-ngaphandle kwezinye iicawa.
Amanqaku alandelayo adweliswe kwiSahluko 15 ("Unqulo Lwamkelwa NguThixo") encwadini ethi "Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?" njengoko yapapashwa ngo-2005 yi-Watchtower Bible kunye neTract Society.
1. Abakhonzi bakaThixo basekela iimfundiso zabo eBhayibhileni (2 Timoti 3: 16-17, 1 Tesalonika 2:13)
KwamaKristu amaninzi, oku mhlawumbi kunikwe. Nangona kunjalo onke amaKristu asebenzisa iBhayibhile, kwaye kukho amahlelo angaphezu kwe-1,500 eUnited States kuphela. Le mfuneko ingawunciphisa njani ukhetho lwethu ngendlela efanelekileyo? Kubonakala ngathi kufuneka sithande inkolo enemfundiso echanekileyo ebonakalayo efumaneka eBhayibhileni, kodwa akukho mntu unokubonakala evumelene nendlela yokuyichaza ngayo. Ukuba ukuchaneka kukubalulekileyo, sinokunciphisa ukhetho lwethu kwiinkonzo ezinemfundiso engatshintshiyo kwiminyaka. Emva kwakho konke, utshintsho olukhulu lwemfundiso lubonisa ukuba ukuchazwa kwangaphambili kwakungalunganga kwaye intlangano ihambelane nengcaciso engalunganga ngaphambi kokuba kwenziwe utshintsho.
Ekubeni uMbutho uhlonishwa ngokutshintsha rhoqo kwiimfundiso, oku kuya kubonakala kubangele ukungathandabuzeki ekugqibeleni kwabo njengenkolo kuphela yeNyaniso.
Enoba bayavumelana nale nqaku yokugqibela okanye cha, le mfuneko ayinakucaca ukuba yintoni na ukuyisebenzisa.
2. Abo baqhuba unqulo lokwenyaniso banqula uYehova kuphela baze bazise igama lakhe ( Mateyu 4:10, Yohane 17: 6)
Amaqela amaninzi amaKristu anqula uThixo (uYehova) aze aziwe igama lakhe ngokuya emnyango ngenye indlela.
Nangona amaNgqina kaYehova esebenzisa igama elithi Yehova ukuze abonise ukholo lwawo, oku kubonakala kungabhekiseli kwiMboniselo yeBhayibhile kunye neTrater Society ngaphandle kwezinye iicawa.
3. Abantu bakaThixo babonisa uthando olungenabugovu omnye komnye (Yohane 13:35)
Kukho iindlela ezininzi ezi "kuboniswa uthando" olungenabugovu. Enye yemimiselo eyimithandazo yeMboniselo ukulwa kwabo ukulwa emkhosini. Bathi ukuba nawuphi na umKristu usengozini yokubulala amanye amaKristu kwimibutho yomkhosi. (Funda isahluko 15 esivela ku "Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile?") Kodwa amaNgqina kaYehova awawodwa amaKristu anqabile ukulwa kwimfazwe phakathi kweentlanga, kwaye oku akuyona indlela yodwa onokubonisa ngayo uthando. Izinyameko kunye nemigudu yokunceda inhlekelele yimizekelo yothando lobuKristu. Abaninzi bayakuxela ukuba ukukhwabanisa (ukugwema kunye nokuxothwa) amalungu akhathazekanga. Ukususwa ekuhlanganyeleni kubhidliza iintsapho kwaye kunokuyingozi kumaNgqina asele ahlupheke ngenxa yokudandatheka kliniki.
4. AmaKristu okwenyaniso amkela uYesu Kristu njengendlela yokusindiswa nguThixo (IZenzo 4:12)
Uninzi lwamacawa amaKristu ahlangabezana nale mfuneko.
5. Abanquli bokwenyaniso abayinxalenye yehlabathi (Yohane 18:36)
Ubungqina bokuba yiBhayibhile buquka ntoni?
AmaKristu akakwazi ukuhlala kwindawo yangaphandle. Umbutho ukholelwa ukuba ukuba "ayikho inxalenye yehlabathi" kuthetha ukuba amaNgqina kaYehova kufuneka aphephe ukungena kwezombusazwe okanye ukufuna "imihlali yehlabathi" kunye nobuhle . Kodwa oko kukuchazwa okunye, enye enye inkolo ikhuthaza. Abanye bacinga ukuba ukubeka imigaqo yeBhayibhile ngaphezu "kwehlabathi" kwanele, apho imeko ezininzi zinokuthi zifaneleke. Abanye, njengamakholwa aseAnabaptist, baya phambili ngaphezu kweMboniselo yoMbutho ngokuzihlukanisa nakwimimandla encinci. Kungakhathaliseki ukuba uyichaza njani le nto, ayiyikucaca ngokucacileyo iNgqina likaYehova ngaphezu kweliphi iqela.
6. Abalandeli bokwenyaniso bakaYesu bashumayela ukuba uBukumkani bukaThixo luphela lithemba lesintu (Mateyu 24:14)
UMbutho uthatha ukuba inkonzo yabo yendlu ngendlu izalisekisa le mfuneko, kodwa abayedwa.
I-Mormon, i-Christadelphians, kunye ne-Seventh Day Adventists ziphakathi kwabo bahlanganyela kwimigudu efanayo. Ukongeza, iCawa yamaKatolika kunye namanye amahlelo amaProtestanti ayeguqula kwihlabathi lonke ngaphambi kweMboniselo yoMbutho. Izizukulwana ezininzi zabantu zaba ngamaKristu ngenxa yabathunywa bevangeli.
Enye ibango lamaNgqina kaYehova kukuba abantu bakaThixo baya kuthiywa yihlabathi. Kwakhona, yabo ayikho kuphela ukholo oluye lwabangela intshutshiso. Amaqela amaninzi amaKristu aye atywayo, ngoku kunye nakwixesha elidlulileyo. Abaprothestani abambalwa abahlala besithi bayatshutshiswa nanamhlanje, njengamaKatolika amaninzi. Omnye unokuthi i-Mormon ne-Anabaptists iye yaphathwa kakubi kunamaNgqina kaYehova.
Ekugqibeleni, kunzima ukusitsho ngokucacileyo ukuba "ubungqina" beBhayibhile bhekisela ngokukhethekileyo okanye kuphela kumaNgqina kaYehova.
Ukujonga Emuva KwiiNtsholongwane Namhla
UbuKristu Nobudlova: Iintlabathi
Ziziphi iicawa ezi-7 zeZityhilelo?
Uwayengumongameli we-Barack Obama Ukholo
Imfundo ekhethekileyo: indawo yokuhlala, amaqhinga, kunye nokuguqulwa
I-Campbell University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Imfazwe Yehlabathi II: Intsimi kaMarshal Erwin Rommel
Indlela yokuqhawula kwi-Comedy-Comedy
IFomula yeFomula Inkcazo
Iimpawu ezimfutshane zoKhuselo xa ufuna Uncedo lweMandla
Umhla woMlando we-Afrika-waseMerika: 1940 ukuya ku-1949
Ngoobani abaVangeli abane?
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yaseGallipoli
Ubundlobongela kunye neeNkcazo zeSixeko
IYunivesithi yePhoenix Online Admissions
Indlela Yokubhala Uthando NgamaJapan aseJapan
Iincwadi ezili-11 eziphezulu malunga noFrank Lloyd Wright
I-LPGA Tour Yearlyly Money Leaders